Waa Kuwan SADDEXDA Ciyaartoy Ee Ay Seefta Barcelona Qaadi Doonto Suuqa January Loona Qorsheeyay In Camp Nou Laga Nadiifiyo. - Gool24.Net
Suuqa bisha January ayaa wali ah mid ay mudo inaga xigto balse waxa haatanba sii curtay qorshaha ay kooxaha ree Yurub ka yeelanayaan suuqaas iyo sida ay ay kooxahoodu u adeeganayaan haddii ay noqoto ciyaartoy ay fasaxaan iyo kuwo ay lasoo saxeexdaanba.
Barcelona oo kamid ah kooxahaas ayaa lagu soo warramayaa inay haatan dajisay qorshaheeda iyadoo qorshaynaysa inay saddex ciyaartoy kooxdeeda ka dirto isla markaana aan ku fikirayn samaynta wax saxeex ah bishaas.
Tababaraha kooxda ee Ernesto Valverde ayaa aamisan in ciyaartoyda kooxdiisu ay ku filan yihiin isaga oo aan doonayn samaynta wax saxeex ah ilaa uu dhaawac ku habsado qaar kamida xiddigahiisa mooyee.
Waxa jira xiiso loo muujinayo qaar kamida xiddigaha kooxdaas waxaana kamid ah da’yarada Moussa Wague iyo Carles Alena oo labaduba dalabaad xoogan helaya.
Alena ayaa u muuqda mid ku bixi doona qaab amaah ah balse aan heshiiskiisa lagu dari doonin qoddob dhigaya in kooxda uu amaahda ugu biirayaa ay iibsan karto waxaana kamid ah kooxaha safka ugu jira Real Betis, Granada, Getafe iyo Celta Vigo iyadoo Celta ay tahay kooxda ugu cad cad.
Wague arrintiisa ayaa sidaas ka duwan, Valverde ayaa markii hore doonayay inuu kaabis ahaan kooxdiisa koowaad ugu haysto xilli ciyaareedkan balse taas ayaan suurogalin waxaana macquul ah inuu amaah ku baxo ama uu ku wareego iib dhigaya in Barca ay dib ula soo wareegi karto.
Ugu dambayn, Arrinta xalka ugu weyn u baahan ayaa ah mida Ivan Rakitic, Muhiimadiisa ayaa ah inuu wakhti ciyaareed helo waxaana la filayaa inuu u dhaqaaqi doono midkooda kooxaha gudaha Spain ama Talyaaniga walow uu xiiso ka helayo Premier League.